DEG DEG+MUUQAAL: Nin ku heyb ah MW Farmaajo oo loo afduubayo Xariga Mukhtaar Roobow & Khal khal amni oo ka jira Villa Somalia
May 16, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 5
Waxgaradka Koonfur galbeed ayaa wacad ku maray in haddii uu madaxweyne Farmaajo sii deyn waayo Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur u xiran doonaan nin caan ah oo ku heyb ah madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, Ciidamada daacada u ah Mukhtaar Roobow ayaa heegan ku jira,waxayna u muuqdaan kuwo maalmaha soo socda tallaabo qaadi doonaa haddii 15-ka cisho ee Dowladda loo qabtay iney ku sii deyso la gaaro.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mudo 150-maalmood ah xabsiga ku heyso Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo loo heysto kicinta shacab iyo waliba inuu adeegsaday awood ka dheeri ah Dowladda Federaalka.
Raxaweyn waa dadnasab ah waligodna dad ma afduban muqtar robow waxuu dilay hamalayan qof xitaa sida cadada u ahayd halay cafiyo ma dhihin waa danbiile hadii lasiidayo yaa damanad qadi karo inuu umada dhigooda dadinayan tan kale waxa dadka iyo baburta afduubto waa h.gidir oo xamarna laga nacay shalay bajaajley ayeey ku qarabten oo ay la bananbaxen manta ilama yar yar imtixan galayo ayay karkodii marsaden meelwaliba kaga nacay tiro ay kubanan baxana malahan oo guryihii biliqda walaga wada saray subax waliba waxa websideyada so galinayo dhibato ayay dowlada wada waa iyaga hada imtixankii ardayda ayaa nin wasarada wax barasha ka mida oo masuliyinta ku jiray qeybiyay sabata kama badno in dowlada lagu xumaynayo
Cali… adigu waxba miaanad dilin ?
Dastuurka waxay ku qorteen,, qofna 24 saacadood wax ka badan ma xidhnaan karo isga oo aan maxkamad xukumin, Rooboow .. waa xabsi ayuu ku jiraaa cidna uma doodo.. yuu u xidhan yahay Rooboow ?
S0maliya dadka intisa badan wa danbile,maxakabad cadila wadanka kama jirto,shababku dadka wa layan oo naxaris malaha,wax didas umad ilaya lama arag lamanaaqal,somalida kale waxa ka dhex jira Dagal jogto ah oo ku saleysan siyasad,lolan qabiil lolalan dhaqalo,casidnimo xumaan farabadan oo qarson,sharciga wadanka oo layska ina tirayo